Raad Raac News Online – Kolo Toure: Waa In Man City Koob Ku Guuleysataa Si Aan U Badbaadino Shaqada Tababare Roberto Mancini.
Kolo Toure: Waa In Man City Koob Ku Guuleysataa Si Aan U Badbaadino Shaqada Tababare Roberto Mancini.
Ciyaartoyda Manchester City ayaa dareemaya inay qasab tahay inay ku guuleystaan koob si ay u badbaadiyaan shaqada tababare Roberto Mancini, sidaasi waxaa yiri Kolo Toure.
Tababaraha Talyaaniga ayaa cadaadis ku jira ka dib markii kooxdiisa ay ku hartay wareega group-yada Champions League islamarkaana 12 dhibcood ka dib martay kooxda hogaanka u heysa Premier League ee Manchester United.
Koobka FA Cup oo ay haatan taagan yihiin wareega 8da ayaana ah fursada ugu fiican ee ay City u heysato inay koob ku qaado xilli ciyaareedkan, Toure ayaana sheegay in qasab ay tahay haatan inay koob qaadaan.
“Haa, dabcan” ayuu u sheegay Daily Mirror markii la weydiiyay hadii ay u baahan yihiin inay ku guuleystaan FA Cup.
“Muhim weyn ayay u tahay ciyaartoyda inaan guuleysano, sababtoo ah waxa ay ka caawineysaa tababaraha inuu halkaan sii joogo, hubaashii.
“Laakiin xitaa anaga, ma dooneyno xilli ciyaareed koob la’aan ah. Taasi City uma dulqaadan karto xilligan.
“Mar walba, koox sida City ah waa adag tahay in koob la’aan baxdo xilli ciyaareedkii. Anaga ahaan, FA Cup muhim ayuu inuu yahay si la mid ah horyaalka, sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan joogta ka dhigano koobkan.”